गल्फः शुक्र च्याम्पियन, नम्बर एक बन्न सफल - Sankalpa Khabar
6. अर्थ मन्त्रालयले किन लुकायो बजेट भाषणको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज ?
गल्फः शुक्र च्याम्पियन, नम्बर एक बन्न सफल
१२ जेष्ठ १८:१७
काठमाडौं । प्रोफेसनल गल्फर शुक्रबहादुर राई ३ अन्डर ६९ को स्कोरसहित समग्रमा १९ अन्डर २६९ को सानदार नतिजामा सूर्य नेपाल गल्फ टूर २०२१–२२ अन्तर्गत सिजनको अन्तिम प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियन बन्न सफल भएका छन्।
करियरकै उत्कृष्ट स्कोर निकालेका धरानका शुक्रले धरानकै निरज तामाङलाई ६ स्ट्रोकले हराउँदै करियरको सातौ उपाधि हात पारे। उपाधिसँगै जितेको नगद दुई लाख पचास हजारले शुक्र पहिलो पटक नेपाल नम्बर एक गल्फर बनेका छन्। उनले यो सिजनको कुल आठमध्ये पाँच प्रतियोगिता मात्र खेलेपनि सर्वाधिक ६ लाख ६३ हजार ५०० नगद पुरस्कार सहित नम्बर एक बनेका हुन्।
२ ओभर ७४ सहित समग्रमा १३ अन्डर २७५ सहित निरज दोस्रो भए। समग्रमा १२ अन्डर २७६ सहित तेस्रो भएका भुवनले नम्बर एक गल्फरको स्थान गुमाए। उनले अन्तिम दिन २ अन्डर ७० स्कोर जोडे। यो सिजन कुल ५ लाख ८० हजार ५ सय नगद पुरस्कार सहित दोस्रो स्थानमा तल झरे।
एमेच्योर वाङ्गचेन ढोन्डुपले १ ओभर ७३ सहित समग्रमा ११ अन्डर २ सय ७७ सहित एमेच्योरतर्फ उपाधि जिते। समग्रमा भने उनी चौथो भए।
अर्का एमेच्योर महेन्द्र फगामी समग्रमा १०अन्डर २७८ सहित एमेच्योरतर्फ दोस्रो भए। उनले अन्तिम दिन ३ अन्डर ६९ को स्कोर गरे। समग्रमा भने उनी पाँचौं भए।
एमेच्योरतर्फ एकक्षत्र राज गरिरहेको सुबाश तामाङले समग्रमा ७ अन्डर २८१ सहित पुर्ण बहादुर शर्मासँग संयुक्तरुपमा छैटाैँ स्थान बाँडे। सुवासले ५अन्डर ६७ र पूर्णले इभन-पार ७२ मा खेल सकाए।
इभन–पार ७२ सहित समग्रमा ५ अन्डर २८३ सहित एमेच्योर आरव डी शाहले आठाैं स्थानमा प्रतियोगिता सकाए । भुवनकुमार रोका र रवि खड्काले समग्रमा ३ अन्डर २ सय ८५ सहित संयुक्तरुपमा नवौ स्थान बाँडे। अन्तिम दिन भुवनले २ ओभर ७४ र रविले १(ओभर ७३ मा खेल सकाए। एमेच्योर सद्भाव आचार्य समग्रमा २-अन्डर २८६ सहित एघारौं र समग्रमा इभन पार २८८ सहित सुर्य प्रसाद शर्मा १२औँ स्थानमा रहे।
पाँच ओभर २९३ सहित व्यावसायिक तर्फ १५औँ भएका जयराम श्रेष्ठले चार लाख ७५ हजार ५ सयसहित उनले आगामी सिजनको सुरुवात तेस्रो स्थानबाट गर्नेछन्।
च्याम्पियन शुक्रले आज पहिलो होलमा बोगी खेपे पनि तेस्रो र सातौ होलको बर्डीले फ्रन्ट नाइन १ अन्डर ३५ मा सकाए । यसपछि ११ औ, १२ औ र १८ औ होलमा एकरएक सट बचाउँदा १४ औ होलमा बोगी प्रहार गर्दा ब्याक नाइन २ अन्डर ३४ मा पुरा गरे।
दोस्रो भएका निरजले फ्रन्ट नाइन इभन पार ३६ मा सकाउने क्रममा तेस्रो र सातौ होलमा बर्डी प्रहार गरे भने चौथो र पाँचौं होलमा एक-एक सट खेर फाले। यसपछि १४औँ र १५औँ होलको बोगीले ब्याक नाइन २-ओभर ३८ मा सकाए।
सूर्य नेपाल टूरमा लामो समय सहयोग गर्ने रामजी राजबाहक तथा रमेश नगरकोटी र समिर तामाङलाई कदरपत्रसहित सम्मान गरियो।
चार दिने प्रतियोगितामा ४३ प्रोफेसनल र ११ एमेच्योरसहित ५४ खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। सूर्य नेपाल प्रालिको प्रायोजनमा नेपाल प्रोफेसनल गल्फर्स संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशी १४ लाख ६१ हजार रहेको छ।
विजेताले दुई लाख ५० हजार, दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमश १ लाख ५५ हजार र १ लाख दश हजार प्राप्त गरे। विजयी खेलाडीहरुलाई सूर्य नेपाल प्रालिका मार्केटिङ उपाध्यक्ष दीपरा लहेरी, नेपाल प्रोफेसनल गल्फर्स संघका अध्यक्ष रवीन्द्रमान श्रेष्ठ र नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेले पुरस्कार वितरण गरे।
प्रोफेसनल गल्फर शुक्रबहादुर राई
बैंक खाता अद्यावधिक गर्न एनआईबिएल एस क्यापिटलको आग्रह
पहिरोले सिद्धार्थ राजमार्ग र तानसेन-तम्घास सडक बन्द
१५ असार ०९:०५
अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूसँग प्रधानसेनापति शर्माको भेटवार्ता
१७ असार १४:०७
त्रिभुवन विमानस्थलमा थप दुई अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान गर्दै
१६ असार १५:५२
१८ असार १०:११
सभापति देउवालाई रचनात्मक दबाब दिने कोइराला समहको निष्कर्ष
१६ असार २०:१०
इरानमा ६.१ रेक्टर स्केलको भूकम्प : हालसम्म पाँचको मृत्यु,…
१८ असार १३:२३